PCB RF tsara indrindra, RF Electronic PCB, RF Design PCB, manokana Flex RF PCB amidy
Description:RF PCB,RF Electronic PCB,RF Design PCB,Manokana manokana Flex RF PCB,,
Ny vokatra avy amin'ny RF PCB , mpanofana manokana avy any Shina, RF PCB , RF Electronic PCB mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny RF Design PCB R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
4 sosona RO4350B 0.8mm RF PCB orinasa  Contact Now
4 fakana PCB sosona 4 ho an'ny tabilazo RF  Contact Now
6 layer RF PCB ho an'ny fanamafisana herinaratra  Contact Now
4 layer misy sosona Rogers RO4350B RF PCB  Contact Now
6 layer RF PCB misy fitaovana RO4350B  Contact Now
Hafaingan'ny RF PCB 2 sosona RO4350B  Contact Now
Rogers material RO4003C ho an'ny RF PCB  Contact Now
6 layer FR4 sy RO4350B RF PCB  Contact Now
6 layer Mixed RF PCB  Contact Now
Antenaina 2 sosona RF PCB 433mhz  Contact Now
Mametaka antena RF PCB 4 layer  Contact Now
Rindran-tsarimihetsika 4 soson-dRandranon'i FR  Contact Now
Rindran-tsipika 2 layer RO4003C RF PCB  Contact Now
4 layer RO4350B ENEPIG PCB  Contact Now
2 layer 1.0mm RO4350B PCB  Contact Now
RF Power PCB 2 layer TG170  Contact Now
4 layer Ro4350B PCB misy 10 mil  Contact Now
4 layer 10 mil Rogers 4003C PCB  Contact Now
4 layer 0.8mm RO4003C ENIG PCB  Contact Now
2 layer RO4350B 10mil ENIG PCB  Contact Now
4 sosona RO4350B 0.8mm RF PCB orinasa
Ny RF sy ny tarehimarika hafa Rehefa mifidy ny fitaovana mety amin'ny fitaovana PCB, ny angovo angovo microwave, ny haavon'ny fandidiana, ny habetsaky ny mari-pana, ny fitaterana ankehitriny sy ny angovo dia tena zava-dehibe. Rehefa...
4 fakana PCB sosona 4 ho an'ny tabilazo RF
Raha tsy misy mombamomba azy na ny endri-javatra ilaina, ny ekipa anay dia tompon'andraikitra amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpanjifa. Ankoatr'izay, ny mpanjifa dia afaka manalavitra ny fihodinana sy ny fitsirihana amin'ny...
6 layer RF PCB ho an'ny fanamafisana herinaratra
Ny faribolana RF dia mora tohina ny tabataba, indrindra ho an'ny fika glitch ary ny firindrana hafa be dia be. Mikorontana tampoka ny ankamaroan'ny ankehitriny amin'ny tsingerin'ny famantaranandro anatiny satria ny microcontroller...
4 layer misy sosona Rogers RO4350B RF PCB
Izahay dia manome antoka fa ny famokarana RF PCB anao dia tsy vitan'ny manam-pahaizana ara-teknikan'i Storm Circuit ihany, fa ny endrik'ilay vokatra mahafeno tanteraka ny fepetra. Alohan'ny famokarana dia mamakafaka ny endrika feno...
6 layer RF PCB misy fitaovana RO4350B
Ny endrika RF (radio frequency) PCB (board circuit board) dia manana tsy fahatokisana betsaka ary noho izany dia lazaina ho "zavakanto mainty." Amin'ny ankapobeny, rehefa mivezivezy amin'ny alàlan'ny fantsom-pahazavana ambany...
Hafaingan'ny RF PCB 2 sosona RO4350B
PCBs micropave RF dia tsy mora tahaka ny manamboatra PCB mahazatra, ary ilaina ny fanaraha-maso amin'ny antsipirihany ny lafin-javatra isan-karazany. Satria mpamokatra RF microwave PCB za-draharaha, i Storm Circuit dia namolavola traikefa...
Rogers material RO4003C ho an'ny RF PCB
Mety ho sarotra ny matoky ny mpanamboatra PCB miaraka amin'ny vokatra saro-pady ataonao, ary tena takatsika izany. Ny Storm Circuit dia tsy vitan'ny manampy ny mpanjifa mandritra ny dingana vita amin'ny famokarana, fa manome fanampiana...
6 layer FR4 sy RO4350B RF PCB
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fitaovam-piadiana miaramila PCB dia ny Rogers 4003c, ny Rogers 4350 ary ny RT5880. Ity singa roa andiam-paritry ny SMT ity dia misy famerana 250. Ny vokatra farany dia nosedraina amin'ny fitaovana mandeha...
Ny circuit circuit dia nanome trano fanamboarana RF PCB nandritra ny taona maro. Ny matihanina Storm circuit dia manana fahaiza-manao amin'ny fanamboarana PCB miorina amin'ny fitaovana PCB Rogers. Soa ihany, ny Storm Circuit dia nahatsapa ny...
Antenaina 2 sosona RF PCB 433mhz
Ny circuit circuit dia mifantoka amin'ny fitaovana PCB Rogers ary aleon'ny RF microwave PCB. Ny fitaovana PCB Rogers isan-karazany dia ahafahantsika misafidy fitaovana mety indrindra mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Ny fizakan-tany...
Mametaka antena RF PCB 4 layer
RF microwave PCBs dia ampiasaina amin'ny vokatra vita an-tserasera tsy mifangaro teknolojia. Raha mamolavola robots, finday avo lenta, rindranasa fiarovana na sensor ianao dia mila misafidy ny RF microwave PCB tonga lafatra ho an'ny...
Rindran-tsarimihetsika 4 soson-dRandranon'i FR
Raha mandroso ny lafiny teknolojia, miditra an-tsena isan'andro ny famolavolana sy ny vokatra vaovao. Ireo fandrosoana ireo dia nitondra fiovana lehibe tamin'ny elektronika. Ho an'ny mpamorona vokatra dia mahaliana ny mahita ny PCB mety...
Rindran-tsipika 2 layer RO4003C RF PCB
Ireo PCB avo lenta rehetra miasa eo ambonin'ireo 100 MHz dia antsoina hoe RF PCB, raha toa kosa ny micro-RF mihetsika amin'ny alàlan'ny 2GHz. Raha ampitahaina amin'ny PCB nentim-paharazana, ny fizotran'ny fampandrosoana...
PCB manasongadina: 1.Layer: 2 2.Material: RO4350B 3.Thickness: 1.1mm 4.Copper: 1OZ 5. lavaka mitoto: 0.25mm 7.Mini sakany / habaka: 0.15mm / 0.15mm 8.Finosena: Volon'ny fametahana Ny fahaizanay manamboatra: Fametahana fahaiza-manao fanamboarana:...
PCB manasongadina: 1.Layer: 2 2.Material: FR4 (TG170) 3.Thickness: 1.6mm 4.Copper: 1OZ 5.Mini hole: 0.2mm 7.Mini sakany / habaka: 0.25mm / 0.25mm 8.Finosena: Volon'ny fametahana Ny fahaizanay manamboatra: Fametahana fahaiza-manao fanamboarana:...
Ny hafainganam- pandeha ambony amin'ny PCB antsoina koa hoe HF PCB.Ny sakany fatran'ny RF dia matetika avy amin'ny 500 MHz mankany 2 GHz, ary ny famolavolana mihoatra ny 100 MHz dia raisina ho RF.We Canfabricate 4 layer RO4350B PCB,...
Ny fitaovam-pandrefesana haingam-pandeha ambony miaraka amin'ny Er tsy miovaova ary mamela fahazoana marika haingam-pandeha ho an'ny mari-pahaizana hafainganam-pandeha ambony dia mandehandeha amin'ny PCB miaraka amin'ny tsy fahita...
Oregon State University? Eny, tena malaza Amerikana universite.Indray amin'ity PCBs ity no vita am-pitaovana antsika.Fa ohatra, misy sosona PCB sy Rogers PCB.10mil RO4350B EINIG PCB.Storm Afaka mamolavola matevina matevina Rogers Material...
Ny tombony amin'ny fampiasana fitaovana miaraka amin'ny X, Y ary Z CTE dia rafitra PCB vokarina izay hitoetra ho tsy miova amin'ny tontolo misy haavo raha toa ka miasa hatramin'ny 40 GHz amin'ny fampiharana analog. Izany dia...
Lazainay fa matetika ny RF PCB sy ny microwave PCB satria fitaovana manokana ihany koa izy ireo fa tsy mahazatra FR4 .Ny fananana Taconic, Rogers, F4B, F4BM.PTFE eto stock, raha afaka manao izany isika, afaka manao haingana ny birao manokanao. Tsy...
Shina RF PCB mpamatsy
Ny fahazoan-dàlana avo lenta antsoina hoe PC HF antsoina koa hoe HF PCB.Ny sakany matetika an'ny RF dia matetika avy amin'ny 500 MHz mankany 2 GHz, ary ny endrika natao mihoatra ny 100 MHz dia raisina ho RF. Ny halavan'ny fantson'ny onjam-peo dia misy mihoatra ny 2 GHz. Tsy misy fiovana lehibe eo anelanelan'ny faritra RF sy microwave manohitra ireo fahita nomerika sy analog. Raha ny tena izy, ny famantarana RF dia fambara famantarana frezy avo lenta avo lenta. Noho izany, tsy toy ny dizitaly, amin'ny fotoana rehetra ny mari-pamantarana RF dia mety amin'ny fitrandrahana rehetra sy ny ambaratonga misy eo amin'ny fetra faran'izay kely sy ambony indrindra. Manana traikefa be dia be amin'ity fakana ity izahay, hatramin'ny 60 GHz PCB izay nataonay.
1.Marenan'ny rafitra rafitra Resin manokana miaraka amin'ny ER kely ambany sy fatiantoka ambany
2.Hybrid Manangana fifangaroan'ny FR4 miaraka amin'ny fitaovana very
3. fanaraha-maso momba ny fahasalamana
4. Ampiasaina amin'ny fiara automatique, Radar, CAR amin'ny serivisy CAR, fanampiana avy any lavitra, Rafitra mavitrika
Lazainay fa matetika ny RF PCB sy ny microwave PCB satria fitaovana manokana ihany koa izy ireo fa tsy fahita matetika. Tsy toy ny mpamatsy hafa mila fotoana ela hividianana fitaovana.
RF PCB RF Electronic PCB RF Design PCB Manokana manokana Flex RF PCB FPC PCB